फिलिप मर्जोफ क्रेग्सलिस्ट किलरको प्रोफाइल
स्मार्ट, राम्रो खोज र घातक
फिलिप मर्कौफ मेडिकल स्कुलको दोस्रो वर्षमा हुँदा उनीहरूलाई चोरी र हत्याको लागि पक्राउ गरिएको थियो। उनले moniker " क्रेग्ससूची सूची खारेज " कमाई किनभने यो विश्वास थियो कि उहाँले आफ्नो पीडित विदेशी विज्ञापन मार्फत कि क्रेग्सलिस्टमा राख्नुभयो।
फिलिप मार्कौफ, फेब्रुअरी 12, 1986 मा न्यूयर्क, शेर्लको सानो शहर (जनसंख्या 3,147) मा बढ्यो। फिलिपको आमाबाबुले विवाह गरेको बेलामा प्राथमिक विद्यालयमा थिए।
उनी आफ्नो आमासँग बसिरहेका थिए, र तिनका जेठा भाइ सिबाकोसमा दन्त चिकित्सक थिए।
बच्चाको रूपमा फिलिप मर्कौफ सम्झनेहरूलाई उनीहरूले राम्रो व्यवहार गरे र असल विद्यार्थीको रूपमा वर्णन गरे।
सम्पूर्ण हाई स्कूल मा मार्कफको व्यवहार अनुकरणीय थियो। उहाँ सफा कट, लोकप्रिय र युवा अदालत र इतिहास क्लब सहित विद्यार्थी गतिविधिहरूमा संलग्न हुनुभयो।
शारीरिक रूपमा उहाँ राम्रो देखिरहेका हुनुहुन्थ्यो र धेरै वर्षका केटाहरुबाट बाहिर निस्कनुभयो। उहाँ व्यापक कंधे र एक हजुर फ्रेम संग6फुट-तीन इन्च लामो थियो। प्रायः केटाकेटीहरूको आकार फुटबल टोलीको लागि बाहिर जान्छ, तर मर्कौफले ब्लिङ टीमको बलियो प्रतियोगी र गोल्फ खेल्न मन परायो।
अकादमिक रूपमा, मार्कफ आफ्नो शिक्षाको बारेमा धेरै गम्भीर थियो र भविष्यको तयारी गर्दै थिए। उनको उपलब्धि एक सम्मानित छात्र र राष्ट्रिय सम्मान समाजको सदस्य थिए। फिलिप मार्क्सको भविष्य उज्ज्वल देखियो।
हाई स्कूल पछि मार्कफले अल्बानिया विश्वविद्यालयमा गए जहाँ उनले एक्सेल गर्न तीव्र इच्छा देखाए। उहाँले तीन वर्षमा जीवनीमा स्नातकको डिग्री संग तीन वर्षमा स्नातक गरे।
सामाजिक रूपमा, मर्कौफ साथीहरूसँग रमाईलो र महिला वरपरको वरिपरिका स्थानहरु थिए। उनले धेरै अध्ययन गरे र स्थानीय अस्पतालको आकस्मिक कोठामा स्वयंसेवकको रूपमा काम गरे।
उसले मजाको लागि गरिरहेको एउटा कुरा उनको साथीहरु संग रातो पोकर खेलहरुमा खेल्न थालेको थियो। उहाँले राम्रो हुनुको लागि प्रतिष्ठा कमाउनु भयो तर गम्भीर खेलाडी-कहिलेकाहीं धेरै गम्भीर। उहाँ धेरै हारेका थिएनन्।
मार्कफाउले अस्पतालमा मेगन म्याकएस्टरलाई भेट्टाएकी थिइन्। मेगन आकर्षक र परिष्कृत थिए र मार्कको भन्दा दुई वर्ष पुरानो थियो। उनले उनलाई मिति मा सोधे, र उनले स्वीकार गरे। उनीहरूले नियमित रूपमा निरन्तर जारी राखे र कलेजको सुहाउँथे।
कलेजबाट स्नातक भएपछि मार्कफ र म्याकअलिस्टर बोस्टनमा गए। मार्कफाउ बोस्टन विश्वविद्यालय मेडिकल स्कूलमा स्वीकृत गरिएको थियो। McAllister को पनि मेडिकल स्कूल जान जाने योजना गरेको छ, तर एकमात्र विद्यालयहरु मध्ये एक जसले उनको स्वीकार गर्नेछ क्यारेबियन मा सेन्ट किट्समा थियो।
17 मई, 2008 मा मार्कफ McCllister लाई प्रस्तावित गरे र उनले स्वीकार गरे। उनले उनलाई मेडिकल स्कूल योजनाहरू पक्राएर राखे र विवाहको योजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न थाले। मिति 14 अगस्त 2009को लागि सेट गरिएको थियो।
उनीहरूको विवाहको बारेमा सबै कुरा पहिलो कक्षामा जाँदै थियो। विवाह रेजिस्ट्रीले मुख्यतया चीन, चाँदी र क्रिस्टलको महंगे नाम ब्रान्ड सूचीबद्ध गर्दछ। यो जस्तो थियो कि उनले सफल भविष्य को लागि योजना बनाइ रहेको थियो त्यो जान्दथे कि दुई अन्ततः एक साथ साझा हुनेछ।
आफ्नो पृष्ठभूमिको भिन्नता विवाहको मिति नजिकको रूपमा अधिक स्पष्ट भयो।
मार्कऑफ संसारबाट आएको छ जहाँ माइक्रो्रोव्वेबल क्यासेरो डिशले ठूलो विवाहको उपहार ल्याउनेछ। मेगन संसारबाट आएको थियो जहाँ एक क्यासेल ​​डिश सम्भवतः रजिस्ट्रीमा सूचीबद्ध हुने छैन।
सत्य थियो, मर्कौफ $ 130,000 को लागि ऋण मा थियो र क्रेडिट को बाकी देखि रहयो थियो। त्यो पनि $ 1400 एक महिना मा उनले भाडामा तिर्नु भएको उधार पैसाबाट आयो।
अप्रिल 2009मा प्रहरीले दुई अलग-अलग अपराधहरूको खोजी गरिरहेको थियो कि निगरानी छविहरू त्यही मानिससँग जोडिएको थियो।
10 अप्रिल मा ट्रिसा लेफ्लरले वेस्टिन होटेलमा बन्दुक प्वाइन्टमा लुटेको थियो जसले एक व्यक्तिलाई क्रेग्ससूचीमा राखेको विदेशी विज्ञापनको जवाफ दिए।
चार दिन पछि 14 अप्रिलमा जुलिसि ब्रिस्मानलाई उनको होटलको कोठाको माथिल्लो मार्कोट Copley प्लेस होटलमा हत्या गरिएको थियो। उनले "एन्डी" नाउँ गरेको व्यक्तिसँग एक भेटघाट गरेका थिए जुन उनको क्रेग्सलिस्ट विज्ञापन मार्फत सम्पर्क गरे।
दुई फोनद्वारा र ईमेल र अन्वेषकहरूले "एन्डीको" ईमेल ठेगाना थियो। यो उनीहरूको अनुसन्धानमा प्रमुख ब्रेक साबित भयो।
समाचार मिडिया हत्याको कथामा छलांग र "Craigslist हत्यारा" को बारे मा समाचार दिन को बारे मा समाचार भर मा देशभर परिसूचित गरिएको थियो। प्रहरीले अपराध र होटलको होटल निगरानी तस्वीरहरूको बारे मा एक बयान जारी गरेको छ जुन पुलिसले सोध्न चाहन्छ।
16 अप्रिल मा, सिंथिया मेलटन एक प्रोभिडेंस, रोड आइल्याण्डमा हलिडे इन एक्सप्रेस मा एक व्यक्ति द्वारा आक्रमण गरिएको थियो। मानिसले उसलाई क्रेग्ससूचीमा राखिएको विज्ञापनमार्फत सम्पर्क गरेको थियो। अधिकारियों को होटल सुरक्षा कैमरे मा पकडे चित्रहरु को जान्दथे कि उनको हमलावर एक नै मान्छे थिए कि बोस्टन प्राधिकारीहरु को लागी हेर्दै थियो - जो कि उनि "Craigslist खूनी" भनिन्छ।
15 अप्रिल, फिलिप मर्चेले बोस्टन छोडे र लिडीडर्ड, कनेक्टिकटमा फक्सवुड क्यासिनोको नेतृत्व गरे। यो उहाँका लागि एक परिचित ठाउँ थियो। उनी त्यहाँ गत तीन महिनामा 19पटक थिए। यो समय उनी दुई दिन बाँकी रहे र $ 700 मा $ 5,300 विजेटमा परिणत गर्न सफल भए।
पुलिससँग शंका छ
18 अप्रिल, 2007 मा, अन्वेषकहरूले "एन्डी" को ईमेल "फिलिप मार्क्सो" लाई लुकेका थिए। उनीहरूसँग एउटा ठेगाना थियो जुन अपार्टमेंट भवन थियो। उनीहरूले मार्कको केटालाई चालकको इजाजतपत्र प्राप्त गर्न सकेनन्।
त्यसपछि, एक भाग्यशाली ब्रेक। तिनीहरूले फेसबुकमा खोजी गरे र युगलको विवाह पृष्ठमा भेट्टाइन् कि मेगन म्याकलेस्टरले उत्साहपूर्वक राखे। त्यो अन्वेषकहरूले कसरी सिके कि मर्कौफ बोस्टन विश्वविद्यालयमा एक मेडिकल विद्यार्थी थिए।
उनीहरूले आफ्नो विद्यार्थी आईडी आइडीको प्रतिलिपि पाएका थिए र उनीहरूको संदिग्ध भिडियो तस्बिरहरूको तुलना गरे।
एक 24-घन्टा निगरानी टोली स्थापित भयो, र तिनीहरूले बीजेको सुपरमार्केटमा मार्कोफलाई पछ्याए। त्यहाँ तिनीहरूले वस्तुहरू उठ्न सक्षम थिए मार्कफो छोयो, र तिनीहरूले तिनीहरूलाई फिंगरप्रिन्ट विश्लेषणको लागि पठाउँछन्।
मार्टोफको राम्रो चित्रहरु Melton र Leffler मा पठाइएको थियो। उनीहरूले उनीहरूलाई उनको आक्रमणकारीको रूपमा चिनेका थिए।
फिलिप मर्कौफ को गिरफ्तार
20 अप्रिल, 2007 मा फिलिप मार्कोफ र मेगन म्याकलेस्टर उनको कार मा थिए, जसको नेतृत्वमा Foxwoods कैसीनो को नेतृत्व मा पुलिस ले I-95 मा उनलाई खींच दिए। बन्दूकको साथमा, तिनीहरूले मार्कोफलाई झुकाए र उनलाई बताए कि उनी जूलिया ब्रिस्मानको हत्याको लागि गिरफ्तारीमा थिए।
मेगन म्याकलिस्टरले सदरमुकाममा राखे र आग्रह गरे कि प्रहरीले गल्ती गर्यो।
मार्कक र म्याकएलिस्टर दुवै प्रश्न गरे। मर्कौफ गाह्रो साबित भयो। उनले आफ्नो मिरांडाको अधिकारको बारेमा विशेष प्रश्नहरू सोधे र उनीहरूलाई सोधेका प्रश्नहरूको प्रत्यक्ष उत्तर दिन सकेनन्।
McAllister बस विपरीत थियो। उनले सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिए कि तिनीहरूले बिना हिचकिचाहट गरे। त्यहाँ कुनै लुगा थिएन।
McAllister, अझै पनि यो कुरा हो कि पुलिस गलत व्यक्ति थियो, उनले सोचेका थिए कि सत्य के साथ समाचार स्रोतहरु लाई सम्पर्क गर्न थाले। त्यहाँ फिलिप मर्कौफको कुनै तरिका थिएन कि उनी जान्दथे कि कसैलाई हत्या गर्न सक्थे।
उनले मार्कोफमा विश्वास गरे, जबसम्म प्रहरीले उनीहरूको अपार्टमेन्टमा पत्ता लगाइएका प्रमाणहरू भोग्नुपरेको थियो।
मार्कोको अपार्टमेन्टमा भेट्टाउनका सबूतहरू समावेश थिए:
एक बन्दूक मेडिकल बुकमा पाइएको थियो जुन हल्ला गरिएको थियो। मार्कफ्रेसनले मेसन, न्यू हैम्पशायरमा एन्ड्रयू मिलरको नाममा चालकको इजाजत पत्र प्रयोग गरेर यो खरीद गरेको थियो। तिनको गिरफ्तारीको समयमा पनि त्यहि लाइसेन्स फेला परेको थियो। मार्क कागजातको खरीद खरिद कागजातमा पनि फेला पर्यो।
ब्राजिलको गोली मारिएको मृत्युमा प्रयोग गरीएको बुलेट।
प्लास्टिक जिप-सम्बन्धहरू जुन त्यहि प्रकारका थिए जसलाई पीडितहरुमा प्रयोग गरिएको थियो।
लेफ्टलरमा प्रयोग भएको मेल खाने टेप।
भाइरससँग कुराकानीको अंशको साथ ल्याप्टप कम्प्युटर।
डिस्पोजेबल TracFone सेल फोन जुन प्रयोग नगरिएको थियो र फेब्रुअरी 2009मा खरिद गरिएको थियो।
दम्पतीको गद्देको बक्सेमा, पुलिसले मोजाको 16 वटा जोडीले भरिएको मोजा फेला पारे, जसमध्ये दुई लिफ्लरबाट चोरी भएको थियो र अर्को दुई कि मेलटनबाट चोरी भएको थियो। अन्य 14 को मालिकहरू पहिचान भएनन्।
मोजाहरू अन्वेषकहरूसँग सम्बन्धित छन्। के यसको मतलब अन्य पीडितहरू थिए? मर्कफोफ यति ठुलो थियो कि एक कारण थियो र ट्रिशा लेफरर लुटेको कारणले गर्दा उनले पहिले यो गरे? अन्वेषकहरू खुसी रहे।
21 अप्रिल, 2007 मा मार्को को जूलिया ब्रिस्मान को हत्या र अन्य चोरी र हथियारों को आरोप को आरोप लगाइएको थियो। उसले दोषी ठहराएन। जमाना अस्वीकार गरियो, र उसलाई नाशु स्ट्रीट जेल पठाइयो।
23 अप्रिल मा, मार्कोफ आफैले आफ्नो छाया संग आफ्नो जेल मा फांसी गरेर आफूलाई कोसिस गर्न कोसिस गरे। उनी इन्फर्मरीमा सारियो र आत्महत्याको घडीमा राखियो।
एउटै दिन, मेगन म्याकएस्टरले युगलको विवाह वेबसाइटलाई हराए।
मार्कको आमाबाबु, बहिनी र तिनको अनुमानित भाइ जोनाथनले 24 अप्रिलमा पहिलो पटक जेलमा भेट्टाए। यो पनि पहिलो पल्ट मार्कफ र तिनका भाइले बोल्नुभएको थियो। बोस्टन हेराल्ड को डेभ वेगेल्ड ले भन्यो कि बैठक को गार्ड द्वारा अचानक गिरफ्तार गरिएको थियो र मर्कफौफ योनाथन लाई भन्यो, "मेरो बारे मा भूलें ... अब अधिक आउछ।"
मार्कअफ दाँया थियो। उनको एक पक्ष को बारे मा बाहिर आए कि कसै को बारे मा नहीं उनको, उनको मंगेतर सहित।
एनबीसी समाचार जेफ रोसनले "आज" मा रिपोर्ट गरेको छ कि मर्कौफले क्रेग्सलिस्टमा ट्राभभिस्टहरू सोचेका थिए। रस्सेनले उनको अनुभवको बारेमा मानिसलाई (अज्ञात बने) साक्षात्कार गरे "क्रेग्सलिस्ट किलर।"
मर्कफौको एउटा याहू थियो! इमेल ठेगाना, "sexaddict5385", जुन उनले वसन्त स्रोतसँग सम्बन्धित 2008 को वसन्तमा प्रयोग गरे। दुई आदानप्राप्त कामुक इमेलहरू, र मर्कफौफले आफैंको स्पष्ट चित्रहरू पठाएको मानिसलाई। उनी जनवरी 2009मा अन्तिम पटक सम्बद्ध थिए।
अन्वेषकहरूले पनि मार्कफिक्सको कम्प्युटरमा "sexaddict5385" याहू खाताको प्रमाण फेला पारे। उनले बीडीएसएम वेबसाइटमा दर्ता गर्न ई-मेल खाता प्रयोग गरेको थियो। यो वैकल्पिक जीवन शैली मा विशेषज्ञता एक वेबसाइट समुदाय हो।
मार्कऑफले आफ्नो खाता "ट्रान्सस्विटिज्म" कोटीमा सेट अप गर्यो जहाँ उनले आफैले एक नयाँ र उनको यौन प्राथमिकताको रूपमा सूचीबद्ध "विनम्र" रूपमा सूचीबद्ध गरे। उनले अन्य चीजहरू बीचमा पोष्ट गरे कि उनी एक कलर र पट्टा र क्रस ड्रेसिंगमा चिनिन्थे।
विवाहको लागि अन्त्य अन्त्य
अप्रिल29 मा, म्याकलिस्टर र उनको आमाले मार्कको जेलमा गए। मर्कौफ जेलमा आत्महत्या गन्तव्यमा ड्रेस गरिएको थियो, "फेर्गसोन सुरक्षा क्यान्सर" भनिन्छ, जसले आत्महत्याको घेरामा कैदीहरूलाई दिइन्छ जुन उनको जेलको कपडाको बदमामा। McAllister उनको साथ 25 मिनेट बिताईयो र संलग्नता तोड्यो। उनले मर्कफौफलाई भने कि उनीहरूले उनलाई कहिल्यै फेरि कहिल्यै देखिनन्। मर्कफौले केही भन्न चाहन्थे तर "मलाई माफ गर्नुहोस्।"
उनले उनीहरूलाई (अहिले) पूर्व-फ्यानको समर्थनमा फेरि प्रेसमा लेखेका छैनन्।
अर्को आत्मघाती प्रयास
अर्को दिन मार्कफले आफ्नो कलाई काट्न तीव्र गतिले चम्मच प्रयोग गरेर आत्महत्या गरे। उहाँले आफैंलाई सानो क्षति गर्नुभयो।
जून 2009 मा मार्कफ इन्फर्मरीबाट बाहिर निस्केको थियो र सामान्य जनसंख्यामा राखिएको थियो। उहाँ केही कैदीहरूसँग अनुकूल हुनुभयो र पोकर खेलहरू सेट अप गर्नुभयो। सबै खाताहरु द्वारा, उनले आफ्नो जीवन को जेल मा समायोजन गरे।
McAllister मार्कफ एक अन्तिम पल्ट उनको भ्रमण गर्न को लागी उसलाई बताउन को लागी कि उनको क्यारिबियाई मा मेडिकल स्कूली मा जाने को योजनाहरु संग अगाडी बढदै थियो। उनको भ्रमणको चाँडै मर्कौफले विरोधी-चिन्ता गोलहरूको भण्डारको साथ पकडिएको थियो जुन जेलको सिकार गरिएको थियो। उहाँ केही दिनको लागि आत्महत्या घडीमा फिर्ता राखिएको थियो तर फेरि सामान्य जनसंख्यामा रिलीज गरिएको थियो।
फिलिप मार्कौफ, 24 वर्षको उमेरमा आइतवार, 15 अगस्ट, 2010 मा आफूलाई आफूलाई मारियो, विवाहको दिन के थियो होला। यो समय उहाँ मर्नु भएको थियो। कुन प्रकारको तीर्थ प्रवृति देखा पर्नु भएको छ, उसले आफ्नो सेल भित्रको तालिकामा म्याकएस्टरको फोटोहरू फैलायो। उनले आफ्नो सेलको ढोका माथि आफ्नो रगतमा "मेगन" र "जेब" लेखे।
उनले आफ्नो टंक, खुट्टा र माटो धितो मा उनको गर्दन मा प्रमुख धमनियां हटा दिए।
उड्ने रगतलाई समात्न तिनले प्लास्टिकको थैलो प्रयोग गरे।
उहाँले शौचालय पेपर निलम्बित गर्नुभयो ताकि तिनी पुनर्जीवित गर्न सकिएन।
उनले आफ्नो टाउकोमा एक प्लास्टिकको झोला खिचेका थिए कि उसले जुवासँग कडा बनायो।
त्यसपछि उहाँले आफ्नो शिरमा राख्नुभयो र एक कम्प्ले संग ढाकिएको।
फिलिप मर्कफौले त्यो के चाहन्थे। उहाँ मरेका थिए।
शुल्क खारेज गरियो
सेप्टेम्बर 16, 2010 मा, अभियुक्तहरूले एक नोएल प्रवर्द्धनलाई दावी गरे (एक कानूनी शब्द मतलब उनीहरूले अगाडी अगाडी बढ्न सकेनन्) र फिलिप मार्कोफ विरुद्धको आरोप खारेज गरे। फिली मार्क मार्क्स विरुद्ध 120 वटा सबूतहरू सार्वजनिक हुनेछ, तर कानूनी रूपमा, मर्कौफ फेरि फेरि के थाहा भयो जब उनको मामला खारेज भयो।
अपडेट: प्रमाणीकरण जारी
मार्च 31, 2011 मा, मेसाचुसेट्स जिल्लाका वकील कार्यालयले उनीहरूलाई फिलिप मार्कोफमा प्रमाण दिए। हजारौं टुक्रा प्रमाणहरू समावेश गरिएको खैरो चमडा कितावहरू एक जोडी थिए कि उनी आफ्नो गिरफ्तारीको समयमा पहने थियो। हत्याको शिकार जूलिया ब्रिस्मानको रगत जूतामा फेला पर्यो।
मर्कौफको जूतामा भेटिएको रगतको साथमा प्रहरीले एउटा अस्पतालमा हल्लाएको फेला पारेको थियो जहाँ उनले बन्दूक, गोली बुँदाहरू, एक चाकू, पीडित अंडरवियर, उत्तेजित इमेलहरू, र डिस्पोजेबल फोनहरू लुकेको छ। अभियुक्तहरूले भने कि प्रमाणले फिलिप मार्कोर्फ विरुद्ध उचित संदेहमा आफ्नो मुद्दा साबित गर्यो।
साथै रिलीज भएको साक्षात्कार थियो कि डिटेक्टेकले मार्कको साथ उनको गिरफ्तारीको दिनमा भएको थियो। साक्षात्कारमा, मर्कौफले इन्कार गरेको कुरा स्वीकारेको छ कि तिनीसँग जासूसको बारेमा वर्णन गर्ने अपराधहरूको बारेमा कुनै ज्ञान छ।
"म टाईओ र कसैलाई लुटिनँ," मार्कफले भने। "मलाई वास्तवमा थाहा छैन तपाईं के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ।" त्यसपछि तिनले एक वकीलको लागि सोधे।
Suffolk काउंटी, मैसाचुसेट्स जिल्ला अटार्नी ड्यान कन्लेले भने, "फिलिप मार्कोफमा स्पष्ट रूपमा गहिरो र पापी हुन्थ्यो जुन उनी आफ्नो कब्रमा लागे।"
> लाउसा, पॉल, "क्रोध को सात दिन: द डेथली अपराध स्प्रेड को क्रेग्सलिस्ट किलर," न्यू यर्क। जेब स्टार। 2010।
> McPhee, Michele R., "A Date with Death: The Secret Life of Accused" Craigslist Killer, "New York।
Yurchenko वाल्ट के हो?
2014 Star Motorcycles बोल्ट समीक्षा: ब्लक मा नयाँ बच्चा सक्छ हार्ले गर्न सक्छन्?
Form1 हाइड र अनलोडको बीच के फरक छ?
मूल्य समर्थनको परिचय
शीर्ष5चेन्साउ मिल्स
कसरी Angstroms कन्वर्ट गर्न को लागी Nanometers
कोलम्बिया अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय प्रवेश
उपनाम को पछि महत्व र उत्पत्ति "हॉवर्ड"
De Broglie Wavelength उदाहरण समस्या
यूएनएच जीपीए, एसट र एक्ट डेटा
12 व्हाइट हाउस तथ्याङ्क तपाईं थाहा छैन
7 सीरियल किरणहरूको बारेमा मिथकहरू
कसरी तपाईंको बिलियर्ड क्युको टिप गोल गर्न
TKTS बूथको अन्डरियर गोप
विद्यार्थीहरुलाई संघर्ष गर्न को लागी शिक्षण रणनीतिहरु
प्रतिष्ठित डोमेन - वास्तवमा कसले तपाईंको घरको मालिक छ?
परिभाषा र अंग्रेजी मा डिस्पोजेटरहरूको उदाहरण
कलकत्ताको ब्लैक होल
मार्नेको पहिलो युद्ध